Unformat Draịvụ - Olee ka unformat a ike mbanye na Windows / Mac
Olee otú Unformat A Draịvụ on Windows ma ọ bụ Mac
Gịnị ka m kwesịrị ime mbụ mgbe formatting a ike mbanye?
Olee otú unformat a ike mbanye?
Video nkuzi nke unformat ike mbanye
1 Gịnị ka m kwesịrị ime mbụ mgbe formatting a ike mbanye?
Ị draịvụ ike gị site mmeghe, na emeghị ndabere oké mkpa data echekwara na ya? Ozi ọma ahụ bụ na unu ka nwere ohere ka unformat na draịvụ ike. Cheta na, ngwa ngwa ị unformat na draịvụ ike, ihe ohere ị ga-agbake gị data. Ọzọkwa, mgbe formatting ike mbanye, unu ga-edebe ndị na-esonụ ihe n'uche gị:
>> Unu nkebi ndị ike mbanye
>> Edela ọ bụla data n'ime ya
>> Unu wụnye Sistem ma ọ bụ ọ bụla omume na ya
>> Unu usoro ya ọzọ
>> Anwala ọ bụla untrusted unformat software na ya
Na ndị ọzọ okwu, adịghị mfe na-agbalị ime ihe ọ bula ka ike mbanye, na nke ahụ bụ nnọọ mkpa. Mgbe ike mbanye Ị, ị nwere ike ịhụ ihe ọ bụla data na ya. Nke ahụ bụ eziokwu, ma naanị gị anya. N'ezie data na-adịghị n'ezie ozugbo ehichapu nke mbanye. Ha ka mụ ebe, na-adịghị ahụ anya ọnọdụ. Nke ahụ bụ n'ihi ohere e site formatted data na-akara dị ka dị ka iwerekwa. Mgbe ị na-Dee nke ọhụrụ data na, ọ ga-ogide ohere maka iwerekwa. Mgbe ahụ formatted data bụ n'ezie na-adịgide adịgide sụrụ, na unu ghara inwe ike ọ laghachi azụ n'ụzọ ọ bụla. N'ihi ya, nke ọma ichebe formatted ike mbanye dị oké mkpa, nke nwere ike ikpebi ma ọ bụrụ na i nwere ike unformat na draịvụ ike ma ọ bụ.
2 Olee otú iji unformat a ike mbanye?
Ka ogologo oge ị na-echebe gị formatted ike mbanye nke ọma, ọ bụ ezi mfe ka unformat draịvụ ike gị na-enweta oké mkpa data azụ. Iji nweta ọkachamara ma nọrọ ná nchebe siri ike mbanye unformat software, mkpa ka ị gụọ na ndu na mata website ọma. N'ebe a, anyị ji obi umeala na-akwado gị Wondershare Data Recovery, ma ọ bụ Wondershare Data Recovery for Mac ma ọ bụrụ na ị na-eji Mac OS X. ha abụọ 100% na-ekwe nkwa nchebe, ma dị mfe iji rụọ ọrụ, ukwuu karịsịa nye beginners.
I nwere ike ịgbalị free ikpe version n'okpuru iṅomi gị formatted ike mbanye na ego ahụ furu efu data tupu ị na-akwụ maka ya. Adịghị ibudata na wụnye ya na draịvụ ike ebe ị furu efu gị data, ma ọ bụ data ga-overwritten.
Na-ahọrọ nri version, download na wụnye ya na kọmputa gị. Mgbe ahụ ẹkedori ya. Ọzọ, ka na-agbalị na unformat ike mbanye usoro ihe omume Windows ọnụ.
Step1 Họrọ a mgbake mode
Mgbe ẹkedori usoro ihe omume, e nwere abụọ mgbake ụdịdị n'ihi na gị na-ahọrọ, Ọkachamara na Standard ọnọdụ. Ma nke ha na-eme otu ihe ahụ.
The Ọkachamara: Nke a mgbake mode bụ nnọọ enyi na enyi na-beginners, n'ihi na e nwere nanị ajụjụ abụọ dị mfe n'ihi na ọrụ ego azịza ha. Mgbe ahụ usoro ihe omume ga-eme ihe niile n'aka ekpe.
The Standard Mode: Ọ dị mma n'ihi na ahụmahụ kọmputa ọrụ. Ọ na-enye dị iche iche mgbake nhọrọ maka ọrụ ịhọrọ site na.
Step2 họrọ ụdị nke faịlụ mgbake
Ka na-Ọkachamara n'ihu, na ị bụ ebe a na-ahọrọ a faịlụ ụdị na ị na-eme atụmatụ iji naghachi n'aka ike mbanye. Ọ bụrụ na ị chọrọ iji naghachi faịlụ niile, ị nwere ike họrọ "All faịlụ".
Step3 Họrọ faịlụ ọnọdụ maka mgbake
Mgbe gosiri faịlụ ụdị, i kwesịrị ezipụta ọnọdụ maka iṅomi. Ọ bụrụ na ọ bụ gị na kọmputa na draịvụ ike formatted, i kwesịrị seach gị dum na kọmputa. Ọ bụrụ na ọ bụ ihe mpụga ike mbanye, i kwesịrị họrọ "Mpụga mbughari ngwaọrụ" ka unformat gị mpụga ike mbanye. N'ezie, ọ bụrụ na naanị a nkebi Ị, ị nwere ike ezipụta ya site "Na a kpọmkwem ọnọdụ." Na ahụ kwadebe ka iṅomi.
Step4 Malite ka iṅomi
Tupu ka iṅomi, biko ego igbe n'ihu "Kwado Deep iṅomi", nke ga-aka unformat na draịvụ ike ọzọ n'enweghị. Mgbe ahụ kụrụ na "Malite".
Step5 Preview na-agbake
The miri Doppler ga-ewe gị a bit ogologo oge, na i nwere ike inwe iko kọfị n'oge. Mgbe Doppler, ndị niile recoverable data na-chọpụtara na e depụtara na edemede. Ị nwere ike ịlele ha otu otu ma họrọ ndị gị mkpa iji naghachi.
Ihe i kwesịrị iburu n'uche bụ na: Unu ịzọpụta natara data na otu ike mbanye ebe ị formatted ha, maka nchekwa condiseration. ọ bụrụ na ị na-ahụ na ihe ndị dị mkpa faịlụ na-efu, i nwere ike iji raw faịlụ mgbake ka iṅomi ọzọ iji chọta ha.
N'oge scanning, ị nwere ike puase ma ọ bụ ịkwụsị ya mgbe ị kwesịrị pụọ ma ọ bụ na-eme ihe ọzọ, na-anọgide na ya mgbe e mesịrị. Mgbe ịkwụsị scanning, ị nwere ike ịzọpụta scanned N'ihi na mbubata ya oge ọzọ ịnọgide. Ma adịghị azọpụta ya na isi iyi ike mbanye zere data overwriting.
3 Video nkuzi nke unformat ike mbanye
> Resource> Draịvụ> Olee otú iji Unformat A Draịvụ na Windows ma ọ bụ Mac